आफूलाई सुहाउँदो फोन कसरी छान्ने ? - Abhiyan news
१६ श्रावण २०७८, शनिबार १६:२७ अभियान न्यूजLeaveaComment on आफूलाई सुहाउँदो फोन कसरी छान्ने ?
हिजोआज मोबाइल फोन नबोक्ने सायदै कमै होलान् । नेपाल दूरसञ्चारको गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या कुल जनसंख्याको १२९ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ४१ लाख पुगेको छ।
माधव नेपालजस्ता नेताहरुका लागि एमालेमा ठाउँ छैन :केपी ओली
३१ असार २०७८, बिहीबार १५:२० अभियान न्यूज